व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन | Jukson
एक जुगमा एक दिन एक फेर आउँछ
उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ ।
श्रद्धेय कवि गोपाल प्रसाद रिमालका यी हरफलाई सुरुमै सम्झेँ । कवि रिमालले यो कविता लेखेका वर्षौँ भयो । यसबीच व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन । हामीले चाहेको उलट पुटल होइन, उथल पुथल पनि होइन तर फेर फेर चाहिँ अवश्य हो । हेरफेर हाम्रो संस्कार, शैली र व्यवहारमा आवश्यक छ । अहिलेसम्म भएका राजनीतिक उथल पुथल र उलट पुलटप्रति हाम्रो श्रद्धा छ । तर जसरी देश चलिरहेको छ, जसरी राज्यसत्तालाई कार्यकर्ताको पालन पोषण गर्ने कारखाना बनाइएको छ, देश बनाउने ईच्छाशक्तिमा जुन शून्यता छ, स्वाभिमानमा जुन गिरावट आएको छ– हेरफेर यहीँनेर जरुरी छ ।
हामीले भनिरहेको रुपान्तरण नै यही हो । यो पानी तताउँदा बन्ने बाफ वा बाफ चिस्याउँदा बन्ने पानी होइन । यो त दूध जमाउँदा बन्ने दही र दही मोथेर निस्कने घिउ हो । न घिउलाई दही बनाउन सकिन्छ फेरि, न दहीलाई दूध बनाउन सकिन्छ । यो रुप र सार दुवैमा हुने परिवर्तन हो । पानी र बाफजस्तै परिवर्तनको युग सकियो । दही र घिऊ जस्तै रुपान्तरण अबको आवश्यकता हो । विवेकशील साझाको परिकल्पना त्यसैका खातिर हो ।
त्यो गोरेटोमा विवेकशील साझाको गण्डकी प्रदेशको संयोजकको भूमिकामा यसरी उभिँदा अत्यन्तै खुशी छु । यतिखेर मलाई लागेको खुशी सविशेष छ । यो फरक खुशी हो । यसको महत्व र घनत्व भिन्न छ, यसको गहिराई र तिब्रता सघन छ । देश र समाजको रुपान्तरणको लागि राजनीति नै गर्ने हुटहुटी र बचनबद्धताका साथ राजनीतिक रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा मलाई यस पल प्राप्त खुशी, ‘खुशीहरुको पनि खुशी’ हो । यो खुशीलाई म आफ्ना शब्दमार्फत् व्यक्त गर्न सक्दिनँ ।
गण्डकी प्रदेशलाई विशेष महत्वका साथ लिने गरिन्छ । यसको चिनारी राष्ट्रियमात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय छ । पदयात्रा, पहाड र हिमालसम्बन्धी विश्वमा जति पनि पुस्तक लेखिएका छन्, त्यसमा एउटै शब्द ‘अन्नपूर्ण’ छुट्यो भने सारा पुस्तक फेल खान्छन् । उत्तरी कोरलाबाट सुरु भएर गोर्खा र लमजुङ्गका हिमाली खर्क र त्यहाँको तिब्बती संस्कृतिहुँदै आठ तालको पहाडी उपत्यका छिचोल्दै नवलपुरको समथर सुस्तासम्म फैलेको गण्डकी प्रदेशले लोभलाग्दो विराटतालाई पुष्टी गर्छ । १ सय ३० थरी धानका प्रजाती त कास्कीमा मात्रै पाइन्छन् । जैविक विविधता र कृषीजन्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश विशाल छ । देवी पार्वती जन्मेको ठाउँ पाङ्गदेखि देवता विष्णुको मन्दीर मुक्तिनाथ यसै प्रदेशमा छन् । नेपालभर उत्पादन हुने हाइड्रोको कुल ५० प्रतिशत क्षमता यही प्रदेशबाट उत्पादन हुन्छ । यति ठूलो उर्जा र विविधता, त्यो पनि साँस्कृति, धार्मिक र प्राकृतिक हिसाबले– यो एउटा चमत्कार हो । प्रकृतिले गण्डकी प्रदेशलाई स्वर्ग बनायो । त्यससँगै, यहाँका प्रतिभाहरुले यस क्षेत्रलाई विश्वसामू चिनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
यतिखेर बागलुङ्गका करन केसी पोखरा रंगशालामा पीपीएल खेलिरहेका छन् । उनले खेल्दै गर्दा उनीसँगै मैदानमा उभिएको विकेट र विकेट पछिल्तिरको पृष्ठभूमिमा देखिएको माछापुच्छ्रे हिमालको तस्वीर देश विदेशमा भाइरल भई रहेका छन् । त्यसरी नै यस क्षेत्रलाई अनिल गुरुङ्गले फुटबलमार्फत् दिएको चिनारी सर्वविदितै छ । आदिकवि देखि युगकवि हुँदै राष्ट्रकविसम्म यसै क्षेत्रमा जन्मिए । उनीहरुलाई सम्झीँदा हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ । तर, यस क्षेत्रलाई गर्वका साथ चिनाउने राजनीतिज्ञ एउटा पनि जन्मेन ।
आदिकवि भानुभक्तको यो भूमिमा ‘आदि राजनीतिज्ञ’ किन अहिलेसम्म जन्मेन ? युग कवि लेखनाथ पौड्यालको यस क्षेत्रमा युग राजनीतिज्ञ खोई ? राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले पौरख चलाएको यस क्षेत्रमा राष्ट्र राजनीतिज्ञ को हो ? उत्तर छैन हामीसँग । कास्की र लमजुङ्गको श्री ३ को श्रीपेच पहिरेर राजनीति सुरु गरेका जंगबहादुर राणा देखि तारानाथ रानाभाट हुँदै रामचन्द्र पौडेल र सशांक कोइरालासम्मका नेताले गण्डकी प्रदेशका जनतालाई कुनै गर्व दिन सकेनन् । कास्कीको नेपथ्य ब्याण्ड लण्डनको वीम्ब्ली स्टाडियममा प्रस्तुत हुँदा १२ हजार नेपलीले हात हातमा नेपाली झण्डा लिएर आफ्नो छाती गर्वले फुलाउँदै एकै स्वरमा ‘जय नेपाल’ भन्छन् । तर, गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका हाम्रा नेता विदेश जाँदा त्यहाँका नेपालीले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्न परेको छ । यो वाध्यता कताबाट आयो ? एकफेर सोचौँ त ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रकृति अपार छ, प्रतिभा अनेक छ तर सबैले गर्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व एउटा पनि छैन । त्यो अभावलाई अब विवेकशील साझा पार्टीले पुरा गर्छ । नेपाल युवाहरुको देश हो । अबका युवाहरु गोलबद्ध हुने मंच र मोर्चा भनेकै विवेकशील साझाको मंच हो । युवाहरु आफ्नै जीवनमा यो देश बदल्न चाहन्छन् । त्यो चाहनालाई समेट्न र सम्बोधन गर्न विवेकशील साझा सक्षम छ ।
राजनीतिप्रति युवाहरुको आकर्षण घट्दै गयो । कारण, राजनीतिलाई अग्रजहरुले फोहोरी खेल बनाई दिए । राजनीतिलाई धर्मजस्तै आस्थाको विषय बनाईयो । राजनीति एउटा हिन्दूको छोरा जन्मिएपछि ऊ पनि स्वतः हिन्दू भएजस्तै ‘आँफै हुने चिज’ होईन । राजनीति त ‘गर्ने चिज’ हो । हजुरबालाई जुन पार्टीको झण्डा ओढाएर दाहसंस्कार गराइयो, नातीले पनि त्यही पार्टीको झण्डा हल्लाएर हिड्नै पर्छ भन्ने मान्यतालाई कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तले मान्दैन । तर, हामी त्यही गरिरहेका छौँ ।
राजनीति आस्थाको विषय हो भनियो । तर यो आस्था होएन, यो त विचार हो । हजुरबुबालाई ठीक लागेको विचार नातीलाई ठीक लाग्छ भन्ने कहाँ हुन्छ ? रुपान्तरण आवश्यक छ । अबको युवा रुपान्तरित हुनु जरुरी छ । उनीहरुले राजनीति गर्नु जरुरी छ । युग बदल्नु छ । तर, सुरुवात् आँफैबाट गर्नु पर्छ । गलत राजनीतिले फोहोर बनाएको देशलाई कुचो लगाएर सफा गर्न फोहोरकै माझमा पस्नु पर्छ । त्यो पनि पटुका कसेर र कुचो हातमा लिएर । अनि बल्ल सफा हुन्छ । बाहिर बसेर फोहोरलाई गाली गरेर सफा हुँदैन । अँध्यारोलाई जति गाली गरेपनि उज्यालो हुँदैन । टुकी बाल्नै पर्छ । हिम्मत गर्नै पर्छ, कम्मर कस्नै पर्छ । म त सफा छु, स्मार्ट भएर बाहिरै बस्छु भनी रह्यो भने त्यो फोहोर कसले सफा गर्दिन्छ ? त्यो अँध्यारो कसले हटाई दिन्छ ? कसैले गर्दैन । आँफै कस्सिने हो । हामी आँफै लागी पर्ने हो । आफ्नै कालमा देशलाई सुन्दर बनाई छाड्ने हो । आउनुस् हातेमालो गरौँ । विवेकशील साझा पार्टी सबै सुन्दर मनहरुलाई सहकार्यको लागि आह्वान् गर्दछ ।
(विवेकशील साझा पार्टीका गण्डकी सँयोजक महेश भण्डारीले सोहि पार्टीको गण्डकी सँयोजक घोषणा कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको सम्पादित पहिलो अंश ।)
यस्ता छन् साउदीका नयाँ युवराजाधिराज जसले उडाए एक रातमा ८२ करोड, किम कार्दासियनसँग गरे रात बिताउन १ अर्बको अफर